Naannoo Magaalaa Qobbootti Ajeechaan TPLFn raawwatame gabaasame
Hidhaattoonni Adaa Bilisummaa Ummata Tigraay /HEWEHAT naannoo mootummaa Amaraa keessatti magaalaa Qobboo fi naannoo isheetti namoottan nagaa irratii haleellaa raawwataniin jiraattoni hedduun du’uu isaani raga baatota waabefachuudhaan maddii oduu AFP gabseera.
Akka namoonii ijaan argan AFP ti himanitti Fulbaana 9, 2021 ganda Gadamaayuu jedhamu, kan Qobboo iraa Kiiloomeetirii 7 fagaatu keessatti yemuu hidhatooni HEWAHAT meeshaa waraanaa Sakatta’uudhaaf mana irra deddeman mormiin ka’ee ture.
Jiraattonii lola waan kaassaniif gareen HEWEHAT boodatti deebi’uudhaanus guyyaa lammataa deebi’anii jiraattotaa irrati haleella raawwatanii namoonii heduun midhamaniiru.
Nammi naannoo sana irraa baqatee magaalaa Dassee gale tokko bakka tokkotti reenfa namoottan torbaa arguu isaa fi isana keessaa namoonii 4 maatii tokko akka ta’an AFP ti himuun isaa gabaasameeraa.
Dubbi himaan Mootummaa naanno Amaaraa Obbo Gizaachoo Muluneeh namoonii hedduun Hidhattoota HEWEHATin du’uu isaanii akka odeeffannoo qaban himanii lakkoofsaa namootan du’anii fi akkataa isaan iti du’an dhiheenyaatii ummataaf ibsinaa jechuun isaanii gabafameera.
Komoshiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhumiinsaa Qobboo irratii gabaasaalee suukanneesaa ta’an argachaa jiraachu isaa akka ibse gabaasini AFP himeera.
HEWEHAT Kanaan dura ibsa kenneen himannaa akkanaa dhugaa akka hin taane ibsuudhaan haalaa turuu isaa gabaasin AFP yaadachiiseera.